ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Diyarbakir-Kurtalan လိုင်းလမ်းမကြီးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး - rayhab ဖြစ်ပါသည်
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: နွေဦးရာသီ Clamp တစ်ဦးက Business ဝယ်ယူ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဏ္ဏဝါလမ်း Alsancak-HalkapınarMüsellesသောတောင်ပေါ်-သက်တမ်းတိုး »
line-Kurtalan4အတွက်စီးပွားရေး Making Diyarbakir (Diyarbakir-ဥလံ IST လက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာ) KM616 + အဝေးပြေးဉမင်လိုဏ်ခေါင်း
စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်4အမှတ်အောင်DİYARBAKIR-KURTALAN LINE (DİYARBAKIR GAR-ula IST, BREAK) KM616 + 4734 အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 398781
က) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: သံမဏိ ribbed stııထောက်ပံ့ရေးနှင့်အလုပ်သမားရေးရာအားဖြည့်များ၏ 345,01 တန်ချိန် - 1.579,71 ferrous ကွန်ကရစ် C3 mxnumx - bituminous ပူ performance အခြေခံအလွှာ၏ 30 တန်ချိန်
ခ) Place: Diyarbakir
က) Place: ÖZALPER mAh ။ STATION ကို CAD ။ NO: 1
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 20.09.2019 - 09: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya Diyarbakir လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်း 493 277 + Making 29 / 10 / 2018 Malatya, Diyarbakir လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: STATE ရထားလမ်းအုပ်ချုပ်ရေး TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD) 493 Making + 2775လမ်းမကြီးဉမင်လိုဏ်ခေါင်း။ ယ်ယူခြင်းဦးစီးဌာနDİYARBAKIR MALATYA REGION LINE KM: 493 277 + လမ်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအဘယျဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 412634 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) နေရပ်လိပ်စာ: Gazi ရပ်ကွက်အတွင်း Medeniyyet CAD ။ NO: 10 /244080 YEŞİLTEPE / YEŞİLYURT / MALATYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124816 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https: //ekap.kik xnumxbolgemalzeme@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကို web address ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ gov.tr/ekap / ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Diyarbakir-Kurtalan လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: 92 + Yaptırılacaktır xnumx'y လမ်းခုံးကျော်တံတား 28 / 11 / 2016 Diyarbakir-Kurtalan လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: 92 + xnumx'y လမ်းခုံးကျော်တံတားYaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 050 အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး။ ဒေသန္တရရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးDiyarbakır-Kurtalan လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး:5+ xnumx'y လမ်းခုံးကျော်တံတားဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြုပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 92 050 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 4734 / 19 2016-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ÖZALPERရပျကှကျ STATION ကိုလမ်းပေါ်မှ 497076 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 1 - 44080 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgeinsaatihale@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ နုမှဘာသာရပ် 4222124800-အောင် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Diyarbakırလှေငြိမ်ထိန်းနံရံများလိုင်း Kurtalan အတွက်ဆောက်လုပ်ထားကြသည် 09 / 12 / 2014 Diyarbakır STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏ Kurtalan လိုင်း TC အထွေထွေဒါရိုက်တာအကြားလှေငြိမ်ထိန်းမြို့ရိုးကိုပြုမိ။ REGION ပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးDiyarbakır Kurtalan လိုင်းကီလိုမီတာ3+ 200-150 + စုစုပေါင်း 300 မီတာလှေငြိမ်ထိန်းနံရံများ 8780 4734 အမှတ်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတွက်ဆောက်လုပ်ထားကြသည်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 159880 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: INÖNÜရပျကှကျ STATION ကိုလမ်းပေါ်မှ 44070 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124820 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgeinsaatihale@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း ...
Diyarbakir Diyarbakır-Batman-Kurtalan လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: အို + 000 90-000 Split လက်ဝါးကပ်တိုင်မွေးမြူရေးတင်ဒါကောက်ချက်ချ 20 / 12 / 2012 2012 / 128347 တင်ဒါအမှတ် Diyarbakir Diyarbakır-Batman-Kurtalan လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: အို + 000 90-000 ကွဲလက်ဝါးကပ်တိုင်မွေးမြူရေးတင်ဒါကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ နုကမ်းလှမ်းမှုကိုတည်ဆောက်နေသဘောတူစာချုပ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ£ 709.668,79 400.783,40 £ŞİMŞEKနှင့်ကုန်သွယ်ရေး, LTD နှင့် ပတ်သက်. ကုန်ကျစရိတ်။ သူကအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဆုချီးမြှင့် Split မွေးမြူရေးပြည်နယ်မီးရထား၏ပါလိမ့်မယ်ကလေးမွေးဖွား TC အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD)5။ REGION ယိမျးမယိုဒါရိုက်တာတင်ဒါမှတ်ပုံတင်နံပါတ်: 2012 / 128347 1) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးက) နေ့စွဲ: 04.10.2012 ခ) ရိုက်ထည့်ပါ: ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်က c) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း: ပွင့်လင်းဃ) ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်: 709.668,79 £ 2) ကိုတင်ဒါဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ဘာသာရပ်တစ်ခု) အမည်: DIYARBAKIR-KURTALAN DIYARBAKIR Batman LINE-km: မွေးမြူရေးခအကြားအို + 000 90-000 Split) အရာကြောင့် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးရထားဉမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့် Peron Yaptırılacaktır 08 / 04 / 2014 ရထားလမ်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းနှင့်PerónYaptırılacaktır TCDD2။ REGION ပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးတူရကီကျန်းကောင်တီ SAZPINAR ရထားလမ်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့် Peron Yaptırılacaktır (250 မီတာပလက်ဖောင်း) အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ် 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 35961 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Marsandiz အပန်းဖြေ 06005 Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 - 3122111571 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: hakanozt@gmail.co ငါ d) ကိုတင်ဒါစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည်: နုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-ဘာသာရပ် ...
လမ်းမကြီးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး, TCDD5။ ဝယ်ယူစီမံခန့်ခွဲရေးတစ်ဝိုက်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya Diyarbakir လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်း 493 277 + Making
Diyarbakir Diyarbakır-Batman-Kurtalan လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: အို + 000 90-000 Split လက်ဝါးကပ်တိုင်မွေးမြူရေးတင်ဒါကောက်ချက်ချ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးရထားဉမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့် Peron Yaptırılacaktır
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Irmak-Zonguldak မီးရထားလိုင်းကီလိုမီတာအဆိုပါ 275 278 + ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင်